JQuery Form သင်ခန်းစာ - JQuery Form Validation Tutorial - နည်းပညာ
ဖြစ်အောင် ပြောင်းလိုက်ပါ။ ပြီးရင်
ဖြစ်အောင် ပြောင်းလိုက်ပါ။ နောက်ဆုံးက </div> ကိုပဲ ပြောင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ အပေါ်တစ်ကြောင်းက ဘယ်နားက </div> လဲဆိုတာ သိအောင်ထည့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲလို ပြောင်းပြီးပြီဆိုရင်တော့ <head> အပိုင်းမှာ လိုအပ်တဲ့ဖိုင်တွေ လင့်ခ်ချိတ်ရပါဦးမယ်။ အောက်မှာ ကြည့်လိုက်ပါ။
လိုအပ်တဲ့ဖိုင်တွေ လင့်ခ်ချိတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ jQuery စရေးပါတော့မယ်။ notepad++ ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် အောက်ပါအတိုင်း ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။
alert(“Enter your username!”);
alert(“Enter your Password!”);
ရိုက်ထည့်ပြီးရင် file>save ကို ရွေးလိုက်ပါ။ အရင်က ရေးထားတဲ့ html ဖိုင်နဲ့ folder တစ်ခုထဲမှာပဲ အတူတူသိမ်းလိုက်ပါ။ နာမည်ကို login.js လို့ပေးပြီး သိမ်းပါ။ folder structure ကို အောက်မှာ ကြည့်လို့ရပါတယ်။ (ပုံကို click နှိပ်ရင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်ရပါမယ်။)
code ကို ရှင်းပြပါမယ်။ ဒီ အပေါ်က code မှာ $(“#form”) ဆိုတာက html ဘက်က id=”form” ကို လှမ်းခေါ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ .submit ဆိုတာက အဲဒီ form ကို submit လုပ်လိုက်ရင် (login button ကိုနှိပ်လိုက်ရင်) အနောက်က function တွေ ဆက်အလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ဆက်အလုပ်လုပ်မယ့် function ထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ စစ်ထားတာက if နဲ့ စစ်ထားပါတယ်။ if($(“input:text”).val()==””) ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က တစ်ကယ်လို့ input အမျိုးအစား text ရဲ့ val ဆိုတာက value ကိုပြောတာပါ။ အဲဒီ value က =”” ဆိုတော့ ဘာမှမရှိဘူးဆိုလျင် (ရှိတယ်ဆို =”???” လို့ စစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ??? တွေနေရာမှာ ရှိနေတဲ့ စာကိုထည့်စစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။) username ထည့်ပါလို့ alert လုပ်ပါမယ်။ ပြီးတော့ user က တစ်ခါတည်း စာရိုက်လို့ရအောင် cursor ကို username field ထဲမှာပဲ ပြန်ရောက်နေအောင် လုပ်ပေးတဲ့ ကုဒ် က $(“input:text”).focus(); ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘာမှမထည့်ထားလို့ form ကို ဆက်အလုပ်မလုပ်စေချင်တဲ့အတွက် return false လို့ ရေးပေးရပါတယ်။ အဲလိုမှမဟုတ်ရင် form က ဘာမှမပါပဲလည်း ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ password field အတွက်ကလည်း စစ်ပုံစစ်နည်းက အတူတူပါပဲ။ နောက်ဆုံး alert(“Logged in!”); ဆိုတာကတော့ username မှာရော password မှာပါ အားလုံးဖြည့်ထားတယ်ဆိုရင် တနည်းအားဖြင့် if နဲ့ စစ်ထားတဲ့ block နှစ်ခုလုံး စစ်တာအောင်သွားရင် Logged in လို့ ပြန်ပြောပေးမယ့် စာကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခု မှတ်ထားရမှာက ဒီသင်ခန်းစာက တစ်ကယ် login function မဟုတ်သေးပါဘူး။ jQuery နဲ့ပဲ user ကို တုံ့ပြန်နိုင်အောင်ရေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ကယ့် login ဖြစ်အောင်တော့ php နဲ့ ရေးပြီး database ရှိမှ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုရင် အောက်မှာ စာကြောင်းတွေ မှန်၊ မမှန် တိုက်စစ်ကြည့်ပါဦး။
← Login form tutorial (HTML,CSS, jQuery) part II လုပ်မယ်ဆိုရင် အခုလုပ် →
gitmang on facebook အသုံးပြုနည်း
Aung Lay on Blogspot ပြုလုပ်နည်း – How to makeablogger website
Ye yint on Professional web developer by Ei Maung နှင့် Ubuntu: Linux for You စာအုပ်များ အခမဲ့ download ပေး
Do Lam Mung on All Burmese Font Converter – Zawgyi ⟺ Unicode, Pyidaungsu, Myanmar3& Win Fonts
မိုးသုခ on XAMPP ဆိုတာဘာလဲ – What is XAMPP?